Beesha Caalamka oo qaadeysa talaabooyin kadib fashilka ku yimid shirkii Afisiyooni | Allbanaadir.com
Home NEWS Beesha Caalamka oo qaadeysa talaabooyin kadib fashilka ku yimid shirkii Afisiyooni
Beesha Caalamka oo qaadeysa talaabooyin kadib fashilka ku yimid shirkii Afisiyooni
Wakiilada beesha caalamka ee jooga Soomaaliya ayaa bilaabay in ay yeeshaan kulamo hoose ay uga arinsanayaan talaabooyinka ay qaadayaan maadaama uu fashil kusoo dhamaaday shirkii garwadeynka ka aheyd ee ka dhacay teendhada Afisiyooni .
Sida aan xogta ku heleyno wakiilada beesha caalamka oo kuwooda ugu tunka weyn joogaan xerada Xalane ayaa kulamo ay yeesheen wax iska weediiyay talaabooyinka xiga ay qaadi karaan hadii lagu kala tagay shirkii Afisiyooni ka socday.
Wakiilada beesha caalamka ayaa la sheegay in marka hore kulamo xog wareesi ah la qaadanayaan dhinacyadii shirka quseeyay kadibna ay soo saari doonaan go’aan ay ku cadeenayaan mowqifkooda iyo talaabada xigta ee la qaadi karo.
Wararka aan helnay ayaa sheegaya in Beesha caalamka u aragto dowlada federaalka Soomaaliya iyo maamulada Puntland iyo Jubbaland in ay caqabad ku yihiin in dalka ka dhacdo doorasho iyaga oo isku haya dano iyaga u gaar ah.
Beesha caalamka ayaa qoraalkii ugu dambeeyay ee soo saareen ugu baaqay madaxda Dowlada federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada in ay u turaan dalka ayna gaaraan heshiis taa oo meesha ka baxday dhagahana ka fureesteen madaxda shireysay.
Xeel dheerayaasha siyaasada falanqeeya ayaa rumeesan in Beesha caalamka markan looga fadhiyo in ay cadeeso mowqifkeeda ayna ka shaqeyso in dalka doorasho aado ama raali ka noqoto in damaca Farmaajo ee mudo kororsiga ah uu shaqeeyo.
Previous articleWarbaahinta Dowlada oo lagu daabacay Qoraal hadal heyn badan abuuray !!
Next articleMeydadka labo Caruur ah uu dhalay Xildhibaan hore oo laga helay duleedka Baydhabo